လက်ကား matte အေးခဲနေသော စိတ်ကြိုက် Glass reed diffuser ဖယောင်းတိုင် ရေယာဉ် စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |Winby
matte frosted စိတ်ကြိုက် Glass reed diffuser ဖယောင်းတိုင်ရေယာဉ်
စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ခရမ်းရောင်အရောင် ဖျာခင်းထားသော Glass စိတ်ကြိုက် အဖုံးပါသော Scented Candle Jar/candle Vessel
1. ဤဖယောင်းတိုင်ပုလင်းကို နှင်းခဲမှန်နှင့် ဝါးအဖုံးဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် မျက်နှာပြင်အရောင်မှာ အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။
2. ဖယောင်းတိုင်အိုးကို အရွယ်အစားနှင့် အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို လက်ခံပါသည်။
အရွယ်အစား- 6.2cm(အနံ)*8.1cm(အမြင့်) 8.2cm(အနံ)*9.8cm(အမြင့်) 10.2cm(အနံ)*13.1cm(အမြင့်)
ဖယောင်းတိုင်ပြုလုပ်ရန် ဖယောင်းတိုင်ပြုလုပ်ရန် ဖယောင်းတိုင်အလွတ် ဖန်အိုးများ
ဖန်ခွက်အလွတ် ဖယောင်းတိုင်ပုံးကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း။
ဤဖန်ခွက်ဖယောင်းတိုင်အိုးတွင် အရွယ်အစားနှင့် အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသည်။pantone card မှအရောင်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် နမူနာဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။
ဖန်တိုင်ပုလင်းကို ဖန်ပုလင်းနှင့် ကျူပြူဆေးပုံးကို အတွဲအဖြစ် ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ထုပ်ပိုးရန်အတွက် လက်ဆောင်သေတ္တာကို အသုံးပြုကာ ထုတ်ကုန်၏ အရည်အသွေးနှင့် အဆင့်ကို သေချာပေါက် မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်၊ ဤဖယောင်းတိုင်ပုလင်းကို ရေအခြေခံ ပတ်ဝန်းကျင် ဆေးဖြင့် ဖျန်းထားသည်။ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် eco-friendly ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏အရည်အသွေးအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
အရွယ်အစား D6.2CM*H8.1CM D10.2CM*H13.1CMM: D8.2CM*H9.8CM
ဖန်ဖယောင်းတိုင်အိုးများကို matte, frosted, polished, spraying စသည့် အမျိုးမျိုးသောသက်ရောက်မှုများဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။သင်နှစ်သက်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ဖန်ခွက်ပေါ်တွင် သင့်ကိုယ်ပိုင်လိုဂို သို့မဟုတ် တံဆိပ်များကို ရိုက်နှိပ်လိုပါကလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။မင်းရဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို ငါတို့ဆီ ပို့ပေးဖို့ပဲလိုတယ်၊ ငါတို့က မင်းအတွက် ရည်ညွှန်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ rendering လုပ်ပေးနိုင်တယ်။
ယခင်- Paraffin Wax ဖြင့် Cotton Candle Wick
နောက်တစ်ခု: ဖယောင်းတိုင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အလှဆင်ထားသော 4OZ သတ္တုသွပ်ဗူးများ
R05 220ml ဖက်ရှင်ကျကျ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း စတိုင်အကြီးကြီး tr...
R04 100ml ရိုးရှင်းသောစတိုင် ဖောက်ထွင်းမြင်ရသော အပြားပုံစံ g...